मेरो बाटोमा बि. स. २०६९ साल - Ddus Gajurel Blogs
मेरो बाटोमा बि. स. २०६९ साल
on Sunday, April 14, 2013 in अनुभब, शुभकामना
मिति २०६९ साल मेरो लागी राम्रो र नराम्रो दुबै अनुभग गरायो,
सपनाहरू बुन्ने र भत्काउने काम पनि धेरै भयो
सपनाहरू पुरा गर्न सपनाको शहरमा धेरै भैतारीदै, ठकर खादै अनुभबहरू बोटुल्दै नया मित्रहरू बनाउदै यो बर्ष बित्यो, सपनालाइ पुरा गर्न र आफु बन्न जन्म स्थान छोडी राजधानीको बास गरायो ।
यो २०६९ साल ले दिएको शिक्षा अनुभब बिर्सन नसक्ने छ । बर्षको शुरूदेखी नै राम्रा र नराम्रो पक्षहरूको भिडमा दैडिदै एक बर्ष पार भयो, बर्षको शुरूबाट मिडियामा हात हाल्न खोज्दै जादा बर्षको अन्यमा त्यो मैका मिल्यो । जिन्दगीको बाटामा माया र काडा रोज् स्थितिमा काडा रोजियो, दुख पछी सुख आउछ भन्ने बाक्य जसले सिकायो उसलाइ धन्यबाद दिन सकिन, उसंग बोलने शब्दहरू नै थिएन म संग ।
सपनाहरू कती पुरा भए कती तुइए टुङ्गै भएन, मेरो सानैदेखीको धोको फिल्मि दुनियामा घुलमिल हुने शपना पनि २०६९ सालले पुरा गरिदियो, काम खोज्दै जादा रोधी डिजिटल काठमाण्डै ले यो अबसर दियो मलाइ । प्रितम दाइ संग काम गर्ने मैका पाए, जुन अनुभब मेरो लागी अबिश्मरणीय छ । सन्तोस सर, गोबिन्द सर, जनक गुरू हरू संग बिलिमका कुराहरू उहाहरूको कामहरू हेर्ने मैका मिल्यो ।
२०६९ फाल्गुन २६ गते हामी तनहु जिल्ला अर्चले झिरूबास गाउमा रहेको ऋसिङ्ग गाउमा फिलिम सुटिङ गर्न सिलसिलामा त्यहा हामी पुगिम । मेरो सेल्टी (नेपाली भाषी गुरूङ चलचित्र) र शोया (नेपाली) को शुटिङमा काम गर्ने पहीलो अनुभब अनिभश्मरयिय रयो । साथै त्यो गाउको कल्चर संस्कृति बुझ्ने मैका पनि मिल्यो ।
कल्चरको बारेम अरू पोष्टमा .....
नबबर्ष २०७० सालको यहाहरूलाइ पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
Labels: अनुभब, शुभकामना